कोरोनाको भुंग्रोमा परेको सल्लेरी गाउँ बचाउन तीन युवाको उदाहरणीय अभियान | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, जेठ १९, २०७८ ६:०४:१७
उनीहरुले आफ्नै गाउँका विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेकाहरुसँग आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थाले । उनीहरुको अभियानमा अहिले ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग रकम संकलन भइसकेको छ । सो रकमबाट उनीहरुले औषधि, अक्सिमिटर, सुगर नाप्ने मेशिन, थर्मोमिट, पीपीई सेट, मास्क, सेनिटाइजरलगायतका सामग्रीहरु गाउँमा बाँडिरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था र कार्यालयहरुलाई वितरण गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो अभियान गाउँमा थप संक्रमण फैलिन नदिने नै हो,’ अभियानकर्तामध्येका एक सर्वधन तामाङले भने, ‘यो अभियानबाट कोरोनाको उपचारमा समस्या भएकाहरुलाई पनि सहयोग गर्छौँ ।’